Harry Lillis Crosby ( Tacoma, United States, 3 maypole ka- 1903 - Alcobendas, Spain, 14 ka-Oktobha ka- 1977 ), eyaziwa ngokuba Bing Crosby waba imvumi ( crooner ) kunye Actor American kunye umsebenzi nempi isiqingatha senkulungwane ingqalelo le Inkwenkwezi yokuqala yemultimedia.
File:BING CROSBY 24.png
IBing Crosby ithengise ngaphezulu kwebhiliyoni enye yerekhodi kwihlabathi jikelele ukuza kuthi ga ngoku   mhlawumbi yeyona nto ithengisayo kakhulu kwimbali, kunye nengoma ethengiswa kakhulu emhlabeni ebizwa ngokuba yiKrisimesi emhlophe (" iKrisimesi emhlophe) "), ngaphezu kweekopi ezingama-50, 000 000 ezithengiswa kwihlabathi liphela. 
UCrosby wayedumile kwaye ethandwa kakhulu kwinkulungwane yama-20 emhlabeni jikelele kangangokuba uvavanyo olwenziwe emva koko lwabonisa ukuba uCrosby wayedumile kwaye ehlonitshwa kunoPopu Pius XII ngelo xesha.
Impumelelo yetshathi yakhe ihlala inomtsalane: Iitshathi ezingama-396 umntu ngamnye, kubandakanya no-41. Ukuba ubala amaxesha amaninzi "i-Christmas White" inikwe amanqaku, oko kungakuzisa inani elingama-43, ngaphezulu kwe-Beatles kunye no-Elvis Presley.
UCrosby wayenee-single singles zonyaka ngamnye phakathi konyaka we-1931 nowe-1954, kwaye wayenama-24 kuphela amaculo aqhelekileyo ngo-1939 kuphela.
I-Bing Crosby erekhodwe ngaphezulu kwama-2 000 erekhodisho kurhwebo kunye namajelo osasazo angama-4,000, ukongeza kuluhlu olubanzi lokubonakala kwifilimu nakumabonwakude, ngoyena mculi urekhodiweyo kwimbali.
I-Bing Crosby ifumene amanqaku angama-41. Iirekhodi ezi-1 kwiitshathi (ezingama-43 kubandakanywa nezihloko zesibini nezesithathu ze "White Christmas"), ngaphezulu kweBeatles (24) kunye no- Elvis Presley onerekhodi (18) yeerekhodi.
Ukurekhodwa kwakhe kwafikelela kwiitshathi amaxesha angama-396, ngaphezulu kukaFrank Sinatra (209) no- Elvis Presley (149) badibene.
UCrosby uveze iingoma ezi-13 zika-Oscar ezikhethiweyo, ezine ziphumelele imbasa yeAlvance ngeNgoma eBalaseleyo: "uLeilani Omnandi" ( Umtshato waseWaikiki, ka-1937), "IKrisimesi emhlophe" ( IHoliday Inn, 1942), "Ukutyibilika kwiNkanyezi "( Ndahamba ngendlela yam, ngo-1944), nakwi-" Pholile, kupholile, ngokuPholileyo ngorhatya "( Apha ufika uMyeni, ngo-1951).
UBing Crosby unikwe iinkwenkwezi ezintathu kwiHollywood Walk of Fame: enye erekhodwa, enye yerediyo, enye yeefilimu.
-Bing Crosby yeyona mculi irekhodiweyo kakhulu kwimbali eneengoma ezingama-400 ezizodwa ezithengisiweyo kwihlabathi, impumelelo ekungekho namnye oquka uFrank Sinatra, u- Elvis Presley, i -Beatles, kunye noMichael Jackson .
Ubomi kunye nomsebenziEdit
UHarry Lillis Crosby wazalelwa eTacoma, eWashington, nge- 3 kaMeyi, ngo- 1903, kwindlu eyakhiwa nguyise (1112 North J Street, Tacoma, Washington). Intsapho yakhe yafudukela eSpokane (eWashington) ngo- 1906, ngenjongo yokufumana umsebenzi. Wayengowesine kubantwana abasixhenxe: amadoda amahlanu, uLarry (1895-1975), uEverett (1896-1966), uTed (1900-1973), uHarry (1903-1977) noBob (1913-1993); kunye nabasetyhini ababini, uCatherine (1905-1988) kunye noMary Rose (1907-1990).
Utata wakhe, uHarry Lowe Crosby (1871-1950), wayengumcwangcisi-mali waseBritane- kwaye emveli waseMelika, kwaye umama wakhe, uCatherine Harrigan (1873-1964) wayeyintombi yomakhi waseMayo County kwaye, ngokucacileyo, wayengummi wase -Iran.
Ookhokho bakhe, uThomas Prence kunye noPatience Brewster, bazalelwa eNgilani bafudukela eUnited States ngenkulungwane ye- 17 . Intsapho yakwaBrewster yeza eMelika ivela eYurophu ngenqanawa edumileyo kaMayflower
Bing Crosby yayingenaso isiqinisekiso sokuzalwa; umhla, ke, ibiyimfihlo kude kube ( icawa ) yecawa yobutsha bakhe, e-Tacoma, yatyhila irekhodi lakhe lokubhaptiza elinegama lokuzalwa kwakhe ngqo.
Ngo- 1910 uHarry Lillis oneminyaka emithandathu wafumana iphepha elipheleleyo elinenqaku kuhlelo lwangeCawa loSithethi-mali, i -Bingville Bugle . IBugle, icandelo elibhalwe ngumhlekisi u-Newton Newkirk, eneneni yayili-parody elapapashwa kwiphepha-ndaba. A ummelwane oneminyaka engama-elinesihlanu ubudala, Valentine Hobart, ekwabelwana ihlombe Crosby ukuze ezi parodies wabiza iphephandaba Bingo for Bingville. Ukusuka koku kuye kwavela igama le-Crosby: icinezelwe ikhonkrithi yokugqibela yegama elithi Bingo, uCrosby wamkela igama le- Bing .
Ngehlobo lowe- 1917 uCrosby wasebenza eSpokane "Auditorium", apho wabona ubungqina begcisa eliphambili ngelo xesha, kubandakanya u- Al Jolson, oza kuthi uCrosby athi, " Kum, wayengoyena mculi ubalaseleyo wakha wakhona ."
Ngo- 1920 Bing yabhaliswa kwiYunivesithi yaseJaitit Gonzaga ese Spokane, eWashington, ngenjongo yokuphumelela njengegqwetha. Ufumene i- B + yenqanaba eliphakathi. Ngelixa e-Gonzaga, wathenga ikhithi yedrum ngokwenza i-imeyile. Emva kokuziqhelanisa nokusebenza nzima, izakhono zakhe zabonakala kwaye wakumenywa ukuba ajoyine iqela lendawo elakhiwa uninzi lwabantwana besikolo ababizwa ngokuba ziMusicaladers, abakhokelwa nguAl Rinker . Uye wakwazi ukufumana imali eninzi ngalo msebenzi kangangokuba wagqiba kwelokuba ashiye izifundo zakhe kunyaka wakhe wokugqibela ukuze azinikele kwilizwe lokuzonwabisa.
I-Bing Crosby: Indawo yeGrammy yeDumeEdit
Ngo-1942 "IKrisimesi emhlophe" IPop yesiko (yodwa) I-Decca Ngo-1974
Ngo-1944 "Ukuntywila kwinkanyezi" IPop yesiko (yodwa) I-Decca 2002
Ngo-1936 "Iipennies ezivela ezulwini" IPop yesiko (yodwa) I-Decca Ngo-2004
Ngo-1944 "Ungandivaleli" IPop yesiko (yodwa) I-Decca Ngo-1998
Last edited on 22 Inyanga kaCanz... 2020, at 17:56
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-22 Inyanga kaCanz... 2020, kwi-17:56